Monogamy | The World of Pinkgold
Posted on December 12, 2007 by cuttiepinkgold
ရေးသင့်လာ မရေးသင့်လားတော့ မသိပေမယ့် သေချာတာကတော့ ရေးချင်လို့ကို ရေးတာပါ။ လူမှုရေး နယ်ပယ်မှာလည်း မဖြစ်မနေ ကြုံတွေ့ရမယ့် ကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်တာကြောင့် သေချာတောင် စဉ်းစား မနေတော့ပဲ ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ပြီးတော့ကို ရေးလိုက်တာပါ။ ဦးအေးမောင် ရေးတဲ့ စိတ်ပညာနဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးမှာပါတဲ့ ကာမနယ်မှ အဆိုးအကောင်းများ ထဲက တစ်လင် တစ်မယား စနစ်ကို ကောက်နုတ်ဖော်ပြတာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
တစ်လင် တစ်မယား စနစ်သည် အိမ်ထောင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ လူတို့၏ တိုးတက်သော အတွေးအခေါ် အာသီသ ဆန္ဒနှင့် မျှော်မှန်းချက်များကို ဖော်ဆောင်ပေးသော စနစ်ဖြစ်သည်။ သမိုင်းဦးခေတ်က တစ်မြေထဲနေ တစ်ရေတည်းသောက် လူသတ္တ၀ါများ စုပေါင်းထားသော အုပ်စုသည် လူ့လောက၌ မူလအုပ်စု ဖြစ်၍ မိသားစု၏ နေရာ ကဏ္ဍမှာ အရေးမပါလှချေ။ လူတို့၌ မိသားစု စိတ်ဓါတ် ရှိနေပြီ ဖြစ်သော်လည်း ထိုစိတ်ဓါတ်မှာ အားနည်း၍ အရာရာ၌ အုပ်စု စိတ်ဓါတ်က ကြီးစိုးလျက်ရှိသည်။ အိမ်ရာထောင်ခြင်းမှာ ကာမရာဂ ပြေငြိမ်းမှုသို့ ဦးတည်ချက် ရှိသည် မှန်သော်လည်း ဘ၀တိုက်ပွဲကို လက်တွဲဆင်နွှဲရန် ပဓါန ရည်ရွယ်ချက် အရင်ခံသော လုပ်ငန်း ကိစ္စဖြစ်သည်။ သားသမီးများ မှာမူ မိမိတို့ဘ၀ ရုန်းကန် လှုပ်ရှားရ၌ ကူဖော်လောင်ဖက် ရရှိရန်အတွက် ကျွေးမွေး ပြုစုရခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ဤသို့ ကာမရာဂနှင့် စီးပွားရေးပြေလည်မှုကို အဦးပြုသော အိမ်ထောင်ရေး နယ်ပယ်၌ မိန်းမနှင့် ကလေးများသည် အရှင်သခင် ယောင်္ကျား၏ ပုဂ္ဂလိက ပစ္စည်းများ ဖြစ်၍၊ လင်နှင့်မယား၊ မိဘနှင့် သားသမီးတို့၏ ဆက်ဆံရေး၌ စစ်မှန်သော မေတ္တာဓါတ် ထွန်ကားနိုင်ရန် အကြောင်းမရှိချေ။
တစ်လင် တစ်မယား အိမ်ထောင်စနစ်ကို ကျင့်သုံးသော လူ့ဘောင်၌မူ မိသားစု၏ နေရာကဏ္ဍသည် ပီပြင်ထင်ပေါ်လာ၍ မိသားစု စိတ်ဓါတ်မှာ များစွာ အားကောင်းလာသည်။ ယောင်္ကျားနှင့် မိန်းမ ပေါင်းဖက်ခြင်းသည် ကာမအလိုကို ဖြည့်၍ ဘ၀ရုန်ကန် လှုပ်ရှားရာ၌ အကူအညီရရှိရန် သက်သက် မဟုတ်တော့ပဲ လက်တွဲ၍ သားသမီးများ ကြီးပွားချမ်းသာရေးကို ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည်။ မိန်းမနှင့် ကလေးသူငယ်များသည် အိမ်ထောင်ဦးစီး၏ ကိုယ်ပိုင် ပစ္စည်း ဘဏ္ဍာမဟုတ်တော့ပဲ လွတ်လပ်သော ပုဂ္ဂိုလ် သတ္တ၀ါများ ဖြစ်လာ၏။ လင်နှင့်မယား၊ မိဘနှင့်သားသမီး ဆက်ဆံမှုသည် မေတ္တာတရားပေါ်၌ အခြေပြု၍ ဆိုင်ရာတာဝန် ၀တ္တရားများဖြင့် သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားသော ဆက်ဆံမှု ဖြစ်လာသည်။
တစ်လင် တစ်မယား စနစ်၌ မေတ္တာဓါတ် ထွန်းကားရန် အကြောင်းအချက် နှစ်ခုရှိသည်။ ပထမအချက်မှာ ယောင်္ကျား မိန်းမတို့သည် အချိန်အရွယ် ရောက်သည်နှင့် အိမ်ထောင်ရေး ကိစ္စကို စိတ်ဝင်စားကြသည် မှန်သော်လည်း အလျင်စလိူမလုပ်ပဲ အချိန်ယူ စဉ်းစဉ်းစားစား ဆောင်ရွက်ကြသည်။ အိမ်ထောင်ဖက်ကို စေ့ငုသောစွာ စိစစ်ရွေးချယ် ကြသည်။ ထိုသို့ မရွေးချယ်လျင်လည်း မဖြစ်။ အကြောင်းမူကား မိမိ၏ ဘ၀ကြင်ဖော်သည် မိမိနှင့်အတူ ရာသက်ပန်လက်တွဲ၍ ဘ၀တိုက်ပွဲကို ဆင်နွှဲရမည့်သူ ဖြစ်သည်။ သို့ဖြင့် ရာသက်ပန် တစ်လင် တစ်မယား စနစ်သည် မိမိစိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်မှု ကြာရှည်လေးမြင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုကို အဦးပြု၍ မေတ္တာဓါတ် ရှင်သန်ကြီးထွားရန် အကြောင်းတစ်ရား ဖြစ်ပေသည်။
ဒုတိယ အချက်မှာ တစ်လင် တစ်မယား စနစ်၌ ကလေးသူငယ်သည် မိဘများကို ကြာရှည် မှီခို အားထားနေ၍ ဖခင်လုပ်သူကလည်း မယားများသော ယောင်္ကျားကဲ့သို့ သားသမီးများကို ပစ်စလက်ခတ် မထားပဲ ကြာရှည် ဂရုတစ်စိုက် ပြုစုစောင့်ရှောက်၏။ သို့ဖြင့် ကလေးသူငယ်များသာ် မိဘများအား စီးပွားဥစ္စာရှာသော အရွယ်၌ ကူညီရန်နှင့် အိုမင်းမစွမ်းသော အရွယ်၌ အလုပ်အကျွေးပြုရန် လက်သုံးတောင်ဝှေး မဟုတ်တော့ချေ။ မိဘများ၏ မေတ္တာရိပ်ကို ခိုလှုံ၍ မိမိတို့၏ ဗီဇစွမ်းအင် လုံ့လ၀ိရိယ ရှိသည်နှင့်အမျှ ကြီးပွားတိုးတက်ရန် အလားအလာရှိသော ပုဂ္ဂိုလ် သတ္တ၀ါများ ဖြစ်လာကြလေသည်။
တစ်နည်းဆိုသော် ရာသက်ပန် တစ်လင် တစ်မယား စနစ်သည် အရေအတွက်နှင့် ရုပ်ပိုင်းလိုအပ်ချက်ကို ပဓါနထားသော အိမ်ထောင်ရေးနယ်မှ အရည်အချင်းနှင့် ရုပ်ပိုင်း နာမ်ပိုင်း ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ပဓါနထားသော အိမ်ထောင်ရေးနယ်သို့ ပုံစံပြောင်းလဲ တိုးတက်လာသော စနစ်ဖြစ်သည်။ ရှေးအခါက လူ့သဘာဝ၏ အဓိက လိုအပ်ချက်မှာ စားဝတ်နေမှု ဖူလုံရန်ဖြစ်၍ ထိုသို့ ဖူလုံရန် အတွက် ဆွေမျိုးသားချင်း တောင့်တင်းမှုသည် အဓိက အရေးကြီးသော အကြောင်း တရားဖြစ်သည်။ ယခုအခါ လူတို့၏ လိုအပ်ချက်မှာ စားဝတ်နေရေး ဖူလုံရန်သာ မဟုတ်တော့ပဲ စိတ်ပိုင်းဘ၀ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်လည်း ဖြစ်ပေရာ ထိုတိုးတက်မှုသည် ရာသက်ပန် တစ်လင် တစ်မယား စနစ်နှင့် ကင်း၍ မဖြစ်နိုင်ပေ။ ထိုစနစ်အရ လင်နှင့်မယား၏ ဆက်ဆံမှုသည် မေတ္တာဓါတ်ဖြင့် ရစ်ပတ် ဖွဲ့စည်းထားသော ဆက်ဆံမှု ဖြစ်သည်။ မိဘများသည်လည်း မေတ္တာသံယောဇဉ် ကြီးမားသော သားသမီးများအား ကျွေးမွေးထားရုံနှင့် မပြီးပဲ သွန်သင်ဆုံမခြင်း ပညာသင်ပေးခြင်း စသည်တို့ဖြင့် လိမ္မာယဉ်ကျေးအောင် ပြုပြင်ဖန်တီး၇န် မိမိတို့၌ တာဝန်ရှိသည်ဟု ခံယူထားကြလေသည်။
Upasaka on December 12, 2007 at 4:19 pm said:
I do agreet with you at all because love is not sexual case itis base on real compasion. If you love , really love please do forget by your self and put your Ego down for your loving someone or something.
Pinkgold on December 13, 2007 at 3:22 am said:
In love affairs, understanding with each is more important then passion and affectionate. If we fall in love someone, we firstly scarify for the one we love and we all should think what we need to live in life peacefully and happily. Ego is also the one we all should forget. With all love and understanding, we can build our beautiful life.